Wednesday November 14, 2018 - 11:01:20 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka mareykanka ayaa sheegay in ay sare usii kaceen khasaaraha ka dhashay dabkii ka kacay dhulka keymaha gobolka California waxaana muuqata in dabku uu dhaafay xadkii lagu xakameyn karay sida ay sheegayaan saraakiisha dab damis
Wararka ka imaanaya wadanka mareykanka ayaa sheegay in ay sare usii kaceen khasaaraha ka dhashay dabkii ka kacay dhulka keymaha gobolka California waxaana muuqata in dabku uu dhaafay xadkii lagu xakameyn karay sida ay sheegayaan saraakiisha dab damiska.
Wararka laga helayo California ayaa sheegaya in dhimashadu ay sii caga cageynayso 48 qof halka tobanaan kale lala'yahay, saraakiisha dab damiska waxay sheegeen in dabku uu ku fiday dhulka keymaha ah iyo deegaanno kale oo ku hareeraysan degmada Paradise ee waqooyiga gobolka California waana dabkii ugu xumaa ee taariikhda soomara gobolkaas marka loo eego tirada dadka ku dhintay.
Dagaal umuuqda in uusan dhamaaneyn ayay ku jiraan kooxaha dab damiska walina waxay ku mashquulsanyihiin sidii ay ugaari lahaayeen halka loo yaqaan wadada degdegga ee 118 halkaas oo sheedda sare laga arkayo holaca oo ku faafaya buuraha wuxuuna dabku wataa dabeyllo saacaddiiba jaraya 40 Maayl taas oo dab damiska ku adkeysay in ay wax xakameeyaan.
Mas'uuliyiin ayaa sheegay in meydadka 13 qof oo laga helay halka loo yaqaan Camp Fire waxaana halkaas ku gubtay inkabadan 7100 oo guri, dabkan oo kacay khamiistii lasoo dhaafay ayaa dadka ku dhax gubaya baabuurtooda xilliyada ay isku dayayaan in ay ka firxadaan goobaha uu dabku ka kacay.
xilli dambe oo maalintii Talaadada ah ayuu madaxweynaha Mareykanka donald Trump iclaamiyay in gobolka california uu kujiro musiibo weyn uuna gobolka u ogolaan doono in loo fasaxo lacago farabadan oo nidaamka federaaliga ah ka imaanaya islamarkaana guryaha loo dhisi doono dadka dhibaatadu gaartay.
Dhul Kumanaan kun oo hiktar ah ayaa la xaqiijiyay in uu gubtay waxaana guul darraystay isku day ay diyaaradaha qumaatiga ukaca ee dab damiska ah ay ku doonayeen in ay ku bakhtijiyaan dabka.